ကြီးပွားရေးအတွေးအပိုင်းအစများ- (၁) – PoemsCorner
မင်္ဂလာပါဗျာ၊ ကျွန်တော် ဆောင်းပါးမရေးဖြစ်တာ ကြာပါပီ၊ ခု ကျွန်တော်ဘာသာပြန်မဲ့ စာအုပ်လေးက Think and Grow Rich ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေသိသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ အများကြီးပါလို့ မျှဝေပေးချင်တာပါ။ ခေါင်းစီးကတော့ လှအောင် ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဒီစာအုပ်လေးကို ရေးတဲ့သူက Napoleon Hill ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ရောင်းရတာ ခုဆို ၂၀၀၀၀၀၀၀ကျော် ရှိပါပီ။ ဒီစာအုပ်လေးက ကျောင်းသင်ရိုးစာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့် ဖတ်စာအုပ်လေး ဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်လေးက ဖတ်စာအုပ်လေးသာ ဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆို ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် အရမ်းကို တန်ဖိုးရှိသွားမယ့် ကျောင်းချိန်လေးတွေ ဖြစ်သွားမှာပါ။ စာအုပ်လေးမှာ ဖော်ပြထားတာက ကျောင်းဟာ အချိန်တွေကို အကုန်လွယ်စေတဲ့ နေရာတစ်ခုပဲလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အောင်မြင် ကျော်ကြားတဲ့သူ အများစုဟာ ကျောင်းချိန်တွေမှာ အချိန်ကုန်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ.. ကျောင်းတွေပီးသွားတော့လဲ ရလာတဲ့ ရလဒ်က ဘ၀အတွက် ဘာ အထောက်အပံ့မှ မပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဒေါက်တာဘွဲ့တွေကို selfstudy အနေနဲ့ လေ့လာပီး စာမေးပွဲ ၀င်ဖြေပီး ဘယ်အချိန်မဆို ရယူနိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်ခင်ဗျ။ (သူတို့နိုင်ငံမှာ ကျောင်းမတက်ဘဲ စာမေးပွဲတွေ ၀င်ဖြေလို့ရတယ်ထင်ပါတယ်) ။ ဒီစာအုပ်လေးက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးသမား ၅၀၀ ကျော်လောက်ကို လေ့လာထားတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။ စာရေးသူ Hill ကိုယ်တိုင်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ကုန်ခံပီး ပြုစုခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးဖြစ်လို့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရတာပါ။
ခု စာဖတ်သူအမျိုးအစားထဲမှာ စီးပွားရေးကို လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိမယ်၊ ကျွန်တော်တို့လို့ ဘာစီးပွားရေးကို ဘယ်လို စလုပ်ရမှန်း မသိတွေလည်းပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်အားကို ကြေးမြင့်မြင့်နဲ့ လိုချင်ကြတဲ့သုတွေလည်း ပါမယ်။ လမ်းပျောက်နေတဲ့သူတွေလည်း ပါမယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ဒီစာအုပ်လေးက လမ်းပြပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘာကို အလိုရှိကြသလဲ??
ပိုက်ဆံလား၊ ဂုဏ်လား၊ ရာထူးလား၊ ရောင့်ရဲခြင်းတွေလား၊
ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ အေးချမ်းခြင်းနဲ့ လူဝင်ဆန့်မှုတွေလား???
ခု ပထမဆုံးအနေနဲ့ စာရေးသူက Barnes ဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အကြောင်းကို စပီး မိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ Barnes က အရမ်းကို စိတ်အားထက်သန်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ပါ သူ့ရဲ့အတွေးကတော့ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးပိုင်ရှင် Thomas Edison နဲ့ စီးပွားရေး အတူတူ ပူးတွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုပဲ။ ပီးတော့ သူဟာ သာမန်လူတန်းစားပါ၊ ရင်းနှီးဖို့ ပိုက်ဆံလဲ မရှိပါဘူး။ လူငယ် မိုက်ရူးရဲ လူတစ်ယောက်ပေါ့လေ။ အက်ဒီဆင်ကတော့ အဲ့အချိန်မှာ အအောင်မြင်ဆုံး တီထွင်မှုပညာရှင် စီးပွားရေးသမား တစ်ယောက်ပါ။ Edisonဟာ အတန်းပညာ သုံးတန်းလောက်ထိပဲ ရှိခဲ့တဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဒေါက်တာဘွဲ့များစွာကို ရယူခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါဘဲ ခင်ဗျာ။ ခုလဲ Barnes ဆိုတဲ့ လူငယ်က အကြီးကြီး ကြံလိုက်ပီဗျ။ သူဟာ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် Edison ကို သွားတွေ့ပီး သူနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပြောခဲ့တယ်။ အက်ဒီဆင်က သူ့ကို လက်မခံပါဘူး။ သူကလည်း မလျော့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာ Edison က သူရဲ့ထက်သန်တဲ့ စိတ်ကို သဘောကျလို့၊ သူ့ရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ယုံကြည်ချက်တွေ ပြင်းထန်နေတာကို မြင်တော့။ ပူးပေါင်းမှုကိုတော့လက်မခံပါဘူး ဒါပေမယ့် မင်း အဲလောက်တောင် လုပ်ချင်ရင်တော့ ငါ့ဆီမှာ အရောင်းဝန်ထမ်းလုပ်ဆိုပီး အလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Barnes က ဒီအဆင့်လောက်ကို မကျေနပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် နီးစပ်လာပီလို့ ဆိုရမှာပေါ့၊ သူ ၀မ်းသာစွာပဲ အလုပ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ စီနီယာတွေက အများကြီး၊ သူ့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ မှေးမှိန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အခွင့်ကောင်းကို မပြတ်ချောင်းနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ရက် အက်ဒီဆင်တီထွင်ထားတဲ့
Ediphone machine ဟာ ဈေးကွက်မှာ ရောင်းအားကျနေတယ်။ ၀ယ်သူမရှိဘူး။ လူတွေကလည်း လက်ရှောင်ကြတယ်။ ဘယ်သူမှ မရောင်းချင်ကြဘူး၊ တာဝန်မယူချင်ကြပါဘူး။ Barnes က ဒီင်္အချိန်မှာ အရောင်းသမားဘ၀မှာ ပျော်ဝင်နေပီ သူရဲ့ ရောင်းအားပေါ်မူတည်ပီး ပိုက်ဆံလည်း ရတာမို့ သူဟာ ငွေရွှင်နေပီပေါ့လေ။ အဲ့အချိန်မှာ သူ စဉ်းစားတယ်၊ ငါ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ၊ ဒီနေရာကို ငါလာတာ Edison နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ခုငါ သူ့ရဲ့ အရောင်းသမားဖြစ်နေတယ်၊ ပိုက်ဆံတွေတော့ ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ငါ့ ရည်မှန်းချက်က မပြည့်ဝသေးဘူး၊ ခု ငါ့အတွက် အခွင့်ကောင်းပဲ ဒီစက်ကို ရောင်းနိုင်ရင် ငါ အောင်မြင်ပီ၊ မရောင်းနိုင်ရင်တော့ ငါ သွားပီပေါ့၊ မိုက်ရူးရဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုပါဘဲ၊ ဒါပေမယ့် အခွင့်အရေးဆိုတာ နှစ်ခါမရဘူး။ အခွင့်အရေးဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ မကောင်းမှု အရေးခြုံပြီး လာတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အရေခွံခွာချိန်လေးပါဘဲ အရေခွံလေး ခွာလိုက်ရင် ရွှေတုံးကြီးလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ Barnes က Edison ကို သွားတွေ့ပီး သူ ဒီစက်ကို တာဝန်ယူ ရောင်းပါရစေလို့ သွားပြောခဲ့တယ်။ သူ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်မခံနိုင်ဘူး၊ ပထမတော့ အက်ဒီဆင်က လက်မခံပါဘူး။ သူ့ရဲ့ စီနီယာကျတဲ့ သူတွေတောင် မလုပ်တဲ့ အလုပ်လေ။ (စီနီယာတွေကလည်း နပ်နေပီ အမြင်နဲ့ ကြည့်ပီး အလုပ်မဖြစ်ဘူးထင်လို့ကို အနားမကပ်တာ။) Barnes ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့် Edison က နောက်ဆုံးတော့ လက်ခံလိုက်ပါတယ်။
Barnes ဟာ Ediphone ကို အောင်မြင်စွာ ရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Edison က သူ့ကို တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် ခန့်လိုက်ပါတယ်။ သူဟာ Ediphone ကို ကမ္ဘာတစ်လုံး ကိုယ်စားလှယ်ယူ ဖြန့်ရတဲ့ ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ လုပ်ရတဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ သူ ရည်မှန်းထားတဲ့ အရာထက် အကျိုးများစွာ ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးက ငါတို့ ဘာလိုချင်လဲ လိုချင်လို့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် ငါတို့ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လိုချင်တာကို ရယူနိုင်တဲ့အထိ ရပ်တည်နိုင်ရမယ် ဆိုတာပါပဲ ခင်ဗျာ။
In: ဆောင်းပါး Posted By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) Date: Apr 24, 2011
အာဇာနည်နေ့ ဂုဏ်ပြု ကဗျာ
Leave comment3Comments & 265 views
အခုလို ဆိုတော့ မပင်မပန်း ပဲ စာအုပ်တအုပ် ဖတ်ဖြစ်သွားပါမယ် ကျေးဇူးပါ
from third world to first world စာအုပ်ကိုလဲ အခုလို ပြန်ဆိုေ၇းသားပေးပါအုံးနော် အချိန်ရ၇င် ပြောတာပါ။
ကြားဖူးထားလို့ အဲစာအုပ် လဲ အတော်ကောင်းတယ် ပြောတယ်။
By: မယ်မနော at Apr 24, 2011
ဟုတ် ခုလို အားပေးဖော် ရတော့လည်း ဆက်ပီး ရေးရတာပေါ့ မယ်မနော . . . မယ်မနောကဗျာလေးတွေလည်း ဖတ်သွားတယ်နော် . . မိန်းမဆန်တဲ့ ကဗျာလေးတွေ ဖြစ်လာပါပီဗျာ . . ပျော်ရွှင်ပါစေ..
By: butterfly (တောင်ပံမဲ့ လိပ်ပြာ) at Apr 25, 2011
ကျေးဇူးဗျာ … ။
By: လူမော်ငြိမ်း at Apr 25, 2011